Netizen Report: Mitranga ny Sivana Ao India, Niverina ny Aterineto ao Kamerona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2017 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Español, हिन्दी, Français, বাংলা, English
Sora-baventy tamin'ny Barcamp atrikasa ara-teknika taona 2010 tao Kashmir. Sary avy amin'i Ehsan Quddusi tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Manome topimaso iraisam-pirenena momba ny fanamby, fandresena sy ny vaovao malaza momba ny zo aterineto manerantany ny Netizen Report an'ny Global Voices Advocacy.
Nilaza ny fanambarana avy amin'ny manampahefam-panjakana nivoaka tamin'ny Alarobia 26 Aprily sy voarain'ny Global Voices fa “nampiasain'ireo vondrona anti-nasionaly sy anti-sosialy tsy araka ny tokony ho izy ny tolotra media sosialy” ao amin'ny Lemaka mba hanakorontanana ny “filaminana sy ny fitoniana” ka mety ho voasakana mandritra ny 30 andro. Ny tranonkala hafa voarara dia ahitana ny QQ, Baidu, WeChat, Google Plus, Skype, Pinterest, Snapchat, YouTube ary Flickr.
Nilatsaka tao anatin'ny fitomboan'ny fitroarana tao Kashmir ny fanapahan-kevitra. Nihamafy ny fihetsiketsehan'ny mpianatra, teny an-dalambe sy tao amin'ny media sosialy tao anatin'izay andro vitsy izay, ho fanoherana ny paikady goavana napetraky ny Lalàna momba ny Fahefana Manokana Ho an'ny Tafika Mitam-piadiana ao India (AFSPA), izay manitatra mazava ny fahefan'ny miaramila ao amin'ny faritra sokajiana fa “mikorontana”.
Manoratra ao amin'ny EZine Dailyo.in, niahiahy i Angshukanta Chakraborty fa nokendrena tao Kashmir ny media sosialy satria nampiseho ny tantara mifanohitra amin'izay antenain'ny manampahefana Indiana aseho :
Amin'ny fanehoana ny lafiny hafa amin'ny tantara ao Kashmir, afaka naneho nandritra ny fotoana kely ny hasarotry ny tantara sy ny fifandirana tena sarotra ao Kashmir ny mponina ao an-toerana, izay nahatonga ny governemanta ho tsy tafatombin-toerana, ary tsy nisy tokotanin'ny maoraly ambony izany.
Namely mafy ny fihariana ihany koa ny fanakatonana, nahatonga ny sehatry ny teknolojiam-baovao manana mpiasa eo amin'ny 15.000 tsy afaka manao ny asany araka ny tokony ho izy, ary mahatonga ny e-varotra sy ny fihariana miankina amin'ny aterineto ho ao anaty toerana manjavozavo.
Mandritra izany, tao an-tanàna Indiana, Kendrapara, nakaton'ny manampahefam-paritany nandritra ny 48 ora ny fifandraisana aterineto mba hisorohana ny fivezivezen'ny lahatsary “manafintohina” izay nolazain'ireo nahita maso fa manevateva ny Mpaminany Mohammad. Noho ny fampiatoana, toa hita fa mikasa hanakana ny fivoaran'ny fitroaram-bahoaka izay nipoaka tamin'ny fiandohan'ny volana Aprily ny manampahefana, raha niteraka fahatezerana tao amin'ny tanàna akaikin'i Bhadrak ny fandefasana votoaty nisy hafatra manambany ny Andriamanitra Haindò tao amin'ny media sosialy .
Ao anatin'ny vaovao tsara, naverin'ny governemantan'i Kamerona ihany nony farany ny fidirana aterineto ao amin'ny faritra miteny anglisy ao amin'ny firenena rehefa nakatona nandritra ny 94 andro. Taorian'izany, nisy koa ny hetsi-panoherana nataon'ny faritra Avaratra atsinanana sy Atsimo atsinanana noho ny fanerena ny teny Frantsay any an-tsekoly sy ny fitsarana ary ny fiangarana eo amin'ny mponina miteny Frantsay sy miteny Anglisy amin'ny fanomezana tolotra ara-panjakana. 20% ireo Kamerona miteny Anglisy no mandrafitra ny fitambaran'ny mponina. Narahan'ny governemanta fandrahonana hamerina indray ny fanakatonana ny fanokafana ny aterineto raha mahita izy ireo fa lasa “fitaovana hanehoana fankahalana sy fizarazarana eo amin'ny Kameroney ny fitaovana.”
Bilaogera Maldiviana maty voatsindron'antsy
Maldiviana Bilaogera sady mpikatroka, Yameen Rasheed no maty voatsindron'antsy vao maraimben'ny 23 Aprily 2017. Efa nametraka fitarainana tany amin'ny polisy i Rasheed, mpitsikera sahisahy ny governemanta sy ny politikany mifototra amin'ny fivavahana mitrifana fa nahazo fandrahonana ho faty tamin'ny alalan'ny somaiso sy media sosialy. Mitaky fanadihadiana iraisampirenena mikasika ny antom-pahafatesany ny Maldiviana. Nikatona iray andro ho fanomezam-boninahitra azy ny biraon'ny Stock Exchange izay niasan'i Rasheed ho teknisianina momba ny Teknolojiam-baovao.
Vehivavy Saodiana miatrika fitsarana noho ny fikatrohana ho an'ny zon'olombelona
Mpikatroka aterineto Saodiana, Naima Al-Matrood no miatrika fitsarana, herintaona taorian'ny nisamborana azy tamin'ny fiampangana azy ho nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fanjakana sy nanitsakitsaka ny filaminam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fananganana kaonty media sosialy roa mitaky ny famotsorana ireo mpiaro ny zon'olombelona hafa izay nogadraina tao amin'ny fanjakana. Mitaky ny famotsorana an'i Al-Matrood sy ireo gadra mpiaro ny zon'olombelona hafa ao Arabia Saodita avy hatrany ny Foibe Helodrano misahana ny Zon'olombelona .
Nomena fampitandremana amin'ny fandikana ny vaovao mitranga any Etazonia ho amin'ny teny ao an-toerana ny tranonkala Indoneziana iray.
Notorian'ny Jeneraly lehiben'ny miaramila Indoneziana Gatot Nurmantyo tany amin'ny Vaomieran'ny Gazety ao Indonezia ny tranonkalam-baovao tsy miankina Tirto.id noho ny fandikàna sy famoahana tatitra fanadihadiana avy amin'ny vohikalam-baovao iray hafa. Tati-baovao nilaza fa nisy miaramila manamboninahitra nandray anjara tamin'ny tetidratsy hanonganana ny Filoha Joko Widodo, ary nilaza koa fa nifandray tamin'ny ISIS ireo manamboninahitra ireo.
Navoakan'ny tranonkalam-baovao momba ny fahalalahana sivily sy ny fiarovana antserasera The Intercept ao Etazonia ny tatitra voalohany nilaza fa nandray anjara tamin'ny teti-dratsy ny Jeneraly Nurmantyo.
Nidera ny fihetsiky ny Jeneraly Nurmantyo ny solombavambahoaka ao amin'ny Vaomieran'ny Antenimiera III, Ahmad Sahroni, nilaza fa: “nanao dingana tsara inoako fa fa tiany hahavoafandrika azy amin'ny trangan-javatra mety hitarika faharavana ny lehiben'ny TNI.”
Mampiasa rindrambaiko mpisompatra ve ny polisy Britanika?
Araka ny filazan'ny tatitra tao amin'ny bilaogy momba ny teknolojiam-baovao VICE Motherboard, nividy rindrambaiko fanarahamaso FlexiSpy ny polisy iray ao Londra, izay ahafahany mametraka rindrambaiko mpisompatra amin'ny finday sy solosaina, ka mamela azy ireo hitsabaka amin'ny antso an-tariby, mandefa ny mikrôfôna sy maka sary amin'ny toerana lavitra amin'ny kamera tratrany. Tsy fantatra raha nividy ny rindrambaiko ho azy manokana na ho ampiasaina amin'ny fomba ofisialy ilay polisy.
Mankatòa ny tsy fitanilan'ny aterineto i Canada
Namoaka fitsipika vaovao mankasitraka tanteraka ny tsy fitanilan'ny aterineto ny Komitin'ny Fifandraisan-davitra sy ny Radio-Fahitalavitra Kanadiana (CTRC), izay fitsipika tokony arahan'ireo mpamatsy fifandraisan-davitra amin'ny tokony handraisana ny votoaty sy ny fitaovana amin'ny aterineto amin'ny fomba mitovy, fa tsy manome fitaovana haingam-pandeha kokoa ho an'ny mpanjifa sasany. Namoaka fanapahan-kevitra manohitra ny fomban'ny zero-rating na fanomezana fidirana maimaim-poana amin'ny tolotra aterineto sasany ihany koa ny komity. Ny rafitra zero-rating dia fandraisana ny votoaty aterineto amin'ny fomba tsy mitovy, izay ahafahan'ireo mpamatsy tolotra mifantina izay votoaty azon'ny mpanjifan'izy ireo idirana amin'ny fomba tsotra indrindra.
Mpanao gazety Iharan'ny Teritery: Fitsabahana Tsy Ara-drariny, tahotra, sy fanivanan-tena ao Eoropa – Vaomieran'i Eoropa
Fanafihana ny Gazety, 2017 – Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety
Quien Defiende Tus Datos? Paragoay – TEDIC
Mahsa Alimardani, Ellery Roberts Biddle, Vishal Manve, Inji Pennu, Carolina Rumuat, Nevin Thompson, Laura Vidal sy Sarah Myers West no niara-nanoratra ity tatitra ity.